abahlinzeki be-gear gearbox, i-gear drive kagesi, i-china gearbox
abahlinzeki be-gear gearbox, ama-gear drive kagesi
INER GROUP iyikomkhulu eliseChina elakhiwe kusukela eminyakeni engama-30 eyedlule kanti iYantai Bonway Manufacturer Co., Ltd yinkampani yegatsha eChina ezwekazini okuyibhizinisi lobuchwepheshe obusezingeni eliphakeme elizinikele kubuchwepheshe bemishini nogesi kagesi ikakhulukazi yama-gearmotors, ama-coupligs, amabhokisi wamagiya wemboni nama-motors kagesi. Ngohlelo oluhle kakhulu lwangemva kokuthengisa, sakhe indawo ebanzi yebhizinisi ebanzi yamaphrojekthi amaningi onjiniyela emazweni amaningi, okwakungeyaseYurophu, eMpumalanga Ephakathi naseNingizimu Melika.
UMNIKELO, UMBONO, I-VALUE
I-NER ithola indawo yayo njengomhlinzeki womhlaba wokuhambisa imikhiqizo.Siziqhenya njengenkampani engagcini ngokuqhuba ibhizinisi ngesilinganiso esiphakeme nesinamandla wokuziphatha okuqinile, kodwa njengenkampani eyakha ubudlelwane bokuthembana nababambiqhaza futhi idale iminikelo ebanzi emphakathini ngokunikela ngobuchwepheshe obuphakeme nezinsizakalo eminyakeni eyikhulu ezayo.
Unyaka wethu osunguliwe
Bangongoti kithi abasiza ukukhishwa konjiniyela okuningi ngomshini wethu. Sijabule kakhulu ukubambisana neSogears Group. Yonke imikhiqizo evela kuyo isebenza kahle, Akukho ukuvuza, akukho okulandelanayo, akukho shimmies, enesikhathi esisheshayo sokuhola, indlela yokuhambisa enokuncintisana futhi ebaluleke kakhulu, Ikhwalithi ephezulu! Noma kunjalo, ngicabanga ukuthi bangabaphakeli abaphambili kunabo bonke.
Ngiyayibonga intengo ephansi abanginikeza yona cishe iminyaka eyi-10 futhi angikaze iguquke. futhi amabhokisi wamagiya angama-helical agijima ngokuthula futhi ahlala epholile. Umkhiqizo omuhle awenzanga emuva! Kumele ngilincome ngokuphelele iqembu, balungile!
Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu ukwenzelwa kwabo amakhasimende, kuyashesha futhi kuyasebenza. Njalo lapho sinombuzo othile mayelana ne-transmission drive, siyababuza futhi sizophendulwa kungakapheli imizuzu engama-30. Vele, nge-imeyili! Uma sikhuluma nge-whatsapp, kungathatha isikhathi esincane. Ngakho-ke, ngamafuphi, esikudingayo impendulo esheshayo emibuzweni yethu futhi bayinkampani esiyifunayo futhi ngokuqinisekile, bangabalingani bethu njalo.
Ithimba lethu livakashele inkampani yakwaSogears futhi lisinikeza ukusekelwa kwamakhasimende okuhlaba umxhwele, ubuchwepheshe, izinkanuko, ikakhulukazi kunjiniyela wezentengiso uLance, ngizwa sengathi ukwenze konke ngomdlandla. Siqhathanise izinkampani eziningi zaseChina futhi ngithanda amaSogears Kuphela. Akukona ukuthi ngibanikeza idumela elihle, kepha bafanelekile!
Izingxenye ze Amakhasimende ethu